शनिबारको दिन किन पीपलको रुखमा पानी चढाइन्छ र पूजा गरिन्छ ?:: Naya Nepal
शनिबारको दिन किन पीपलको रुखमा पानी चढाइन्छ र पूजा गरिन्छ ?
काठमाडौं । हिन्दु धर्मावलम्वीहरुले पीपलको रुखमा पानी चढाउने र पूजा गर्ने गर्छन । यो पुरानो मान्यता हो । आस्था र विश्वास हो ।
पीपललाई धार्मिक, पौराणिक, आयुर्वेदिक एवम् वातावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
हिन्दु धर्मावलम्बिले पिपलको वृक्षलाई विष्णु भगवानको प्रतिक मानेर पुजा गर्छन ।
शनिबार पिपलको परिक्रमा, पूजा गर्नु, दियो बाल्नु तथा जल चढाउनु अति नै शुभ मानिन्छ।
धर्मशास्त्रमा वर्णन भएअनुसार पिपलको पूजा केबल शनिबार मात्र गर्नुपर्दछ ।
पुराणमा भनिए अनुसार समुन्द्र मन्थनको समयमा देवी लक्ष्मी भन्दा अगाडि उनकी दिदि, अलक्ष्मी उत्पन्न भईन्, र पछि लक्ष्मी आइन ।
अनि देवी लक्ष्मीले श्रीविष्णुको रुप धारण गरिन, यसबाट अलक्ष्मी रुष्ट बनिन।
यस्तो देखेर श्रीविष्णुले अलक्ष्मीलाई आफ्नो प्रिय वृक्ष (बासस्थान) पिपलको वृक्षमा बस्ने आदेश दिए र भने यहाँ तिमी आराधाना गर ।
म समय समयमा तिमीलाई भेट्न आइरहन्छु साथै देवी लक्ष्मीले पनि भनिन, म प्रत्येक शनिबार तिमीसँग भेट्नको लागि पिपल वृक्षमा आउने गर्छु।
भनिन्छ यही कारण शनिबारका दिन श्रीविष्णु र देवी लक्ष्मी पिपलको वृक्षमा बस्ने गर्दछन् ।
त्यसैले शनिबारको दिन पिपलको वृक्षको पूजा गर्नु, बत्ती बाल्नु तथा जल वा तेल चढाउँदा वा परिक्रमा गर्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ।
साथै धनधान्यको पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास छ। भक्तजनको यही विश्वासका कारण नै शास्त्रमा पिपललाई देव वृक्ष भनिएको छ ।
गीतामा भगवान श्रीकृष्णले त पिपलको वृक्षलाई स्वयम् आफ्नो रुप बताएका छन ।
पिपलको पूजा गर्यो भने एकसाथ सबै देवताहरुको पूजा गरेको फल प्राप्त हुन्छ ।
वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि पिपललाई पूजनिय मानिन्छ । किनकी यो यस्तो वृक्ष हो जसले गर्मीमा शितलता प्रदान गर्दछ र जाडोमा तातो हावा निकाल्दछ ।
पिपलबाट सधैं अक्सीजनको संचार हुन्छ । आयुर्वेदमा भनिएको छ कि पिपलको हरेक भाग जस्तै पात, फल सबै औषधीको रुपमा प्रयोगमा आउछ । यसबाट कयौं गम्भीर रोगहरुको पनि उपचार सम्भव हुन्छ ।
काठमाडौं, असोज १७ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ ।
आज सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् उहाँले राष्ट्रपति ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानियाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मेन्सन गरिएको ट्वीटमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानियाको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई सैनिक अस्पताल अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ ।
शुक्रबार गरिएको कोरोना परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि उहाँ ह्वाइट हाउसमै आइसोलेसनमा बसेपनि ज्वरो नघटेपछि सैन्य अस्पताल भर्ना गरिएको हो ।
ज्वरोसहित कोभिड १९ का सामान्य लक्षण देखिएपछि ट्रम्पलाई वाल्टर रिड नेशनल मिलिटरी मेडिकल सेन्टरमा भर्ना गरिएको राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।
यद्यपि, अस्पताल भर्ना हुनुअघि एक भिडियो सन्देश दिँदै ट्रम्पले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै विश्वभरका नेताहरुले सन्देश पठाएका छन् ।
कोरोनाप्रति निकै हेलचेक्र्याईपूर्ण व्यवहार गर्दै आउनु भएको राष्ट्रपति ट्रम्प आफैलाई संक्रमण भएपछि अस्पताल जाने क्रममा भने मास्क लगाउनुभएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
उता, राष्ट्रपति पदका डेमोक्रेयाट प्रतिष्पर्धी जो बाइडन र उनकी पत्नीको कोरोना परीक्षणको नतिजा भने नेगेटिभ आएको छ ।
अमेरिकामा कोरोना महामारीको नियन्त्रणलाई लिएर राष्ट्रपति ट्रम्पको ब्यापक आलोचना हुने गरेको छ भने कोरोनाबाट अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक हो ।
सरकारलाई प्रश्न: के तिमीलाई दुख्दैन ?
विश्वव्यापी फैलिएको छ कोरोना संक्रमण । अनि शासन गर्न व्यस्त तर जनताको पीडामा मौन जस्तै लाग्छ सरकार । यतिबेला हजारौंको रोजगारी गुमेको छ । यही भिडमा केही दयावान र मनकारी व्यक्तिको जमात छ जस्ले खुलामन्चमा खाना ख्वाउँदैछन् । ठाउँमा खल्तीबाट खर्च निकालेर राहत वितरण गरिरहेका छन् । तर मौन अनी शान्त छ सरकार किनकी उसलाई दुखेकै छैन । कोरोना संक्रमण बढिरहेको, कोरोनामै नीजि मेडिकल कलेजले सर्वसाधारणबाट मोटो रकम असुलेको, कोरोनाकै बाहानामा कालोबजारी मौलाएको, विदेशमा रहेका नेपालीको वेवास्त गरिरहेको छ सरकार । यहीबेला सत्यका पक्षधर चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी ईन्तु न चिन्तु भई टिचिङ अस्पतालमा लडिरहेका छन् । दैनिक बलात्कारका घटना बढिरहेको छ । यो सबै सरकारले देखेको छैन ।
किनकी उस्लाई त काखी च्यापेर कुन पदमा कस्लाई पुर्‍याउने भन्दैमा ठिक्क छ । सरकारको न्याय देख्ने आँँखाहरुमा कालोबजारी र अन्यायको पर्दाहरुले ढाकिएका छन् । किनकी सरकार लकडाउनले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई अझै कमजोर बनाउँदै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै मन्त्रालय थप्ने तयारीमा लागेको छ । मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको हेरफेरमा लागेको छ ।
दैनिक एक हजार बढि कोरोना संक्रमितको संख्या पुगिरहेको छ तर यो समयमा ति कोरोना संक्रमितलाई व्यवस्थित गर्ने र भीड व्यवस्थापन गर्ने स्थानिय प्रसाशन केन्द्र सरकारको मुख हेरेर बस्छ । अनि केन्द्र सरकार २५ हजार संक्रमित पुगेपछि लकडाउन गर्ने भन्दै उर्दी जारी गर्दै बस्छ । दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने मानिसलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । तर बाध्यता उनीहरु आफ्नो परिवारसँग एउटै कोठामा बस्न बाध्य हुन्छन । खै ति बस्ने आईसोलेसन कक्ष ? आफ्नो साना कलिला सन्तानमा कोरोना सर्ने होकी भन्दै रातदिन चिन्ता गर्दै एकै कोठामा बस्न बाध्य छन् श्रमिक । के यी सबै देख्दा तिम्लाई दुख्दैन सरकार ?
एकछाक खान र पेट पाल्नकै लागी खुलामन्चमा दैनिक हजारौंको भिड लाग्ने गरेको छ । तीनलाई खुवाउने केही दयावान व्यक्तित्वहरु छन् । तर तिनैले तिरेको करबाट फुलको गुच्छाको वर्षा गर्दै देशका प्रधानमन्त्रीको आवागमन हुन्छ । अनि ति सर्वसाधारण चुपचाप खाना खान बसेको थालमा हेलिकप्टरबाट बर्सेको फुल हेर्छन । के तिनीहरुको थालमा खाना दिने कर्तव्य बिर्सेको सरकारले उनिहरुकै थालमा फुलको गुच्छा झार्दा थोरै लाज नलागेकै हो ?
खुलामन्चमा खानाको लागि बसेको लाम देखेर भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको नारा त लजाएन होला नी ? यीनै सर्वसाधारणले तिरेको करबाट हिड्नेहरुको मन किन नदुखेको होला ? कोरोनाको कारण सयौंले ज्यान गुमाएका छन् । नीजि मेडिकलहरुले सरकारको मापदण्ड विपरित मोटो रकम असुल्दैै छन् । सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर बढि रकम असुलेका छन् तर ति व्यापारीलाई खै त कठघरामा ल्याईएको यहाँ त प्याज व्यापारीको कारबाहीमा परिरहेका छन् । आखिर कालोबजारी त नीजि मेडिकलले पनि त गरेका हुन् नी । सरकारले तोकेको भन्दा पनि दोब्बर मुल्यमा सर्वसाधारणले पिसिआर परीक्षण गर्न बाध्य भई सरकारले केही गर्न नसक्दा के तिम्लाई दुखेको छैन र ?
उता वैदेशिक रोजगारीमा गएका रोजगारी गुमाएर महिनौ दिनदेखी उतै अलपत्र परेका नागरिकको हाल उस्तै छ । रोईकराई गरिरहेका छन् । लामो समयदेखी रोजगारी गुमाई भिषा अवधी समेत सकिएर जरिवाना तिरेर बस्न बाध्य भएका छन् । कतिले घरबाट रकम मागेर दैनिक गुजारा टारिरहेका छन् । कतिले घरबाट विदेश गएको ऋण समेत तिर्दा नतिर्दै रोजगारी गुमाएका कारण आत्महत्या समेत गरेका छन् । आफ्ना नागरिक विदेशमा महिनौ दिनसम्म अलपत्र पर्दा चुपचाप छ सरकार । स्वदेश फिर्तीका लागी विदेशमा भएका रुवाबासी सुन्दा के तिम्रो मन दुख्दैन सरकार ?
एउटै माग राखेर सत्यका पक्षधर डा. गोविन्द केसी विगत १८ दिनदेखी आन्दोलनरत छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भईरहेको छ । पटक पटक एउटै माग राखेर अनशन बस्न किन बाध्य पार्छौ सरकार ? सरकार डा. केसीका सच्चा माग पुरा गर्न केले रोकिरहन्छ बारम्बार ? डा. केसीका माग जायज होईनन् भने किन अनशन गर्न दिन्छौ, हो भने किन पटक पटक आन्दोलन गर्न बाध्य पार्छौ ?
दैनिक बढिरहेका बलात्कारका घटनाले घरको गेटबाट आमा, छोरी निस्केपछि परिवारमा एक खालको त्रास सिर्जना हुन्छ । मेरी छोरीलाई कसैले केही नगरोस भन्दै बाबुआमा अत्तालिनु पर्ने अवस्था आएको छ । १४ वर्षीया सम्झना विक, सर्लाहीकी संगिता अनि कन्चपुरकी निर्मलाका आत्माले शान्ती पाउने किसिमको कानुन बन्यो त ? हामी सुरक्षित छौं भन्ने आभाष समेत दिलाउन सरकारको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । घरबाट निस्कदा बाबुआमा डरमर्दो अवस्थामा हुनुपर्ने आखिर कहिलेसम्म ?
गत पुसमा अश्रुधारा बगाउँदै आएका उखु किसानले लकडाउनले थलिदा समेत वर्षौदेखीको रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । उनीहरुको भोट पाएका जनप्रतिनिधी अर्थात सरकारमा बसेकाहरुको मन किन शान्त होला ? आखिर तिम्लाई किन दुख्दैन सरकार ? देशभर बाढी पहिरो, विपत्ति, भोकमरी, अनिकाल, अन्यायले जनताहरु पिल्सिरहँदा सरकार किन सुन्दैन ? स्थानीय सरकार किन मौन छ ? यी प्रश्नको जवाफ खोइ हामीलाई ? न्याय खोइ ? मानवअधिकार खोइ नेपालीको ?